ဒေါပုံရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
ပေအကျယ် ( 25×50 ) အိမ် ရောင်းမည်။
-လိပ်စာ : ကြည်စု ရပ်ကွက် ဒေါပုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9993285 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Ko Shwe Htoo Real Estate ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10044411 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095154484. 09971777811 097770540666. 09682029555 09887755595
ပေအကျယ်( ၂၅ × ၅၀)အိမ်ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10039665 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေအကျယ်(25×50) အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10009493 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေအကျယ် ( 25×50 ) အိမ်ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9993397 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
25×30 3ထပ်တိုက် 2000
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9972980 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
25× 2ထပ်တိုက်ခံအိမ် 2500
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9972908 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်လိုသူများအတွက် ဒေါပုံမြို့နယ် လူစည်ကားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ခုနှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးရောင်းရန် ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9963149 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လမုတန်းရပ်ကွက် မဟာဗန္ဓုလ တံတားအနီး 25'x50' အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9962280 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
New Home Realty - Real Estate Agency in Yangon ပိတ်ရန်
ဒေါပုံ Capital အနီးမှ ၃ ထပ် ST လုံးချင်းအရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9941965 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်